यी उपाय अपनाऊ, कोरोनाबाट बाचौ ! आफु पनि जानौ र सक्दो शेयर गरि अरुलाई पनि बचाऊ – Butwal Sandesh
यी उपाय अपनाऊ, कोरोनाबाट बाचौ ! आफु पनि जानौ र सक्दो शेयर गरि अरुलाई पनि बचाऊ
काठमान्डौ। कोरोना भाइ सरको वास्तविका नाम नोबेल कोरोना भाइ रस हो । कोरोना भाइ रस रुघाखोकीदेखि मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम र सिभिएर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोमजस्ता गम्भीर रो’ग निम्त्याउने भाइर सहरूको ठूलो समूहको एउटा सदस्य अन्तर्गत पर्दछ ।
सर्वप्रथम सन् २००३ मा देखिएको एसएआरएस र कोरोना एउटै समूहका भाइ रस हुन् । दुवै भाइ रसले बि’रामीलाई गम्भिर बनाउन सक्छन् । कोरोना भाइ रसको सं क्रमण नेपालसहित चीनका साथै अमेरिका, हङकङ, मकाउ, ताइवान, फ्रान्स लगायत १०० भन्दा बढी देशमा भेटिएको छ ।
हालसम्म मानवमा देखा नपरेको र उपचारको उपाय समेत पत्ता नलागेको कोरोना भाइ रस सं क्रमणलाई निक्कै खत*रनाक मानिएको छ । कोरोना भाइ रस पशुपंक्षी र सी फुडको माध्यमबाट सर्ने गर्छ । यो भाइ रसले मानिसहरुमा सहजै सर्ने गुण बोकेको हुन्छ ।
विशेष गरी एउटै परिवारका सदस्यहरु बि’रामी भएको अवस्थामा भने एकबाट अर्काेमा काेराेना भाइ रसकाे सं क्रमण हुने संभावना उच्च हुनेगर्छ । भाइ रसको सं क्रमण भएको समयमा मि’र्गौलाले काम गर्न छोड्ने हुनाले मानिसको नि’धन हुनेगर्छ ।हालसम्म यस भाइ रसको सं क्रमणबाट लाग्ने रो’गको उपचारको पत्ता लागेको छैन ।
भाइ रसबाट सं क्रमित बि’रामीलाई देखा परेको लक्षणको आधारमा उपचार गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । यो भाइ रसविरुद्ध हालसम्म कुनै खोप उपलब्ध छैन ।काेराेना भाइ रस सं क्रमणका लक्षणमा रुघा खोकी लाग्नु, १०४ डिग्री फरेनहाइटभन्दा बढी ज्वरो आउनु, श्वासप्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु, घाँटी, टाउको तथा जिउ दुख्ने निमोनिया हुनु, सिभिएर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम हुनु ।
कोरोना बाट बच्न रुघाखोकी तथा श्वासप्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने । नियमित साबुन पानीले हात धुने । खोक्दा र हाछ्युँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने । जङ्गली तथा घरेलु पशुपंक्षीसँग सिधै स’म्पर्क नगर्ने । अण्डा तथा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने । फ्लुको जस्तो लक्षण देखिए अस्पताल जाने ।